Hupfu chigayo michina sikuruwa conveyor Muupfu zvigayo, sikuruwa conveyors anowanzo shandiswa kuendesa zvinhu. Ivo vari kuendesa michina inovimba nekutenderera kutenderera kuti isundire hombe zvinhu zvekutenderera kufamba kana kuteedzera kufambisa. TLSS dzakateerana ...Verenga zvimwe »
Hupfu Mill Chigadziro Plansifter Muchina / Plansifter YeMupunga Kukuya Mills
FSFG akateedzana mapurani anoshandiswa zvakanyanya muhupfu hwemazuva ano chigayo uye mupunga kukuya zvigayo.Zvinonyanya kushandiswa kugaya gorosi nepakati kusefa zvinhu, zvinogona zvakare kushandiswa kweupfu cheki kusefa. Yakasiyana sieving dhizaini inoshanda kune akasiyana kusefa ndima uye akasiyana midd ...Verenga zvimwe »
Muchigayo cheupfu, maitiro ekubvisa matombo kubva mugorosi anonzi de-dombo. Matombo makuru uye madiki ane akasiyana siyana masizi pane ayo egorosi anogona kubviswa nenzira yakapusa yekuongorora, nepo mamwe mabwe ane saizi yakafanana negorosi inoda hunyanzvi ...Verenga zvimwe »
Iyo indasitiri yezvikafu indasitiri yembiru yehupfumi hwenyika yeChina, uye michina yechikafu indasitiri inopa michina yeindasitiri yezvikafu. Nekuvandudzwa kwezvinodiwa nevanhu zvetsika yechikafu uye kubudirira kwemaresitorendi, maresitorendi, uye othe ...Verenga zvimwe »